Forex အခြေခံဆောင်းပါးများ | FXCC
ပညာရေး - ဆောင်းပါးများနှင့်သင်ခန်းစာများ - Forex အခြေခံ
Forex အခြေခံဆောင်းပါးများ အဆိုပါ Forex စျေးကွက်နှင့်သင်ကုန်သွယ်အခြေခံနားလည်ကူညီပေးပါမည်သောအခြေခံလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်း Get ။ ထောက်ပံ့အားလုံးဆောင်းပါးများကိုသင်သည်သင်၏အသိပညာမြှင့်တင်ရန်နှင့်ခြုံငုံစက်မှုလုပ်ငန်းသင့်ရဲ့အသိအမြင်တိုးမြှင့်ကူညီပေးဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။
Onaregular basis, the forex market witnessesadiverse collection of trading strategies. Each has its own set of advantages and disadvantages, but some tactics haveastronger track record than others when it comes to achieving performance.
Swing trading has gainedalarge popularity among forex traders for its ability to separate the wheat from the chaff. Some consider it to beafundamental form of forex trading.
But what is swing trading, and why are we talking about it?
ရှုပ်ထွေးသည်မည်သည့်ရှုပ်ထွေးသောညီမျှခြင်းထက်မဆို ပို၍ လွယ်ကူသည်။
Trading Forex ကိုစတင်ရန်ငွေမည်မျှလိုအပ်သနည်း။
ကုန်သည်အသစ်များရှာဖွေနေသည့်ဘုံမေးခွန်းတစ်ခုမှာ Forex အရောင်းအဝယ်စတင်ရန်လိုအပ်သောကုန်သွယ်မှုအရင်းအနှီးမည်မျှဖြစ်သည်။
ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာလား၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ နဲ့စနိုင်လား။
ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးခရီးကိုစတင်ရန်ရှာဖွေနေသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ပါစေ။
Forex Trading မဟာဗျူဟာကဘာလဲ။
pips ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းသည် Forex trading တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမြတ်အစွန်းရရှိရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ဘုရားသခင့်နာမတော်ဖြင့် Forex trading မဟာဗျူဟာကားအဘယ်နည်း၊
Stop loss ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ပြီး Forex မှာအမြတ်ရမလဲ။
ကုန်သည်တစ် ဦး အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာကုန်သွယ်မှုမှရသောအမြတ်များကိုစုဆောင်းထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အချို့သော pips များကိုပြုလုပ်ပါက၎င်းတို့ကိုစျေးကွက်သို့ပြန်လည်ပေးမည့်အစား၎င်းတို့ကိုသိမ်းထားရမည်။
Forex trading ၌ "free margin" ဟူသောစကားလုံးကိုသင်ကြားဖူးပြီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာ Forex ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်သင်နားလည်ရမည့်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
ဤလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်ခွင့်ကို Forex တွင်မည်သို့ဖော်ပြထားသည်၊ မည်သို့တွက်ချက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သြဇာသက်ဆိုင်ပုံနှင့်အခြားများစွာကိုဖြိုဖျက်လိမ့်မည်။
Forex နေ့ကုန်သွယ်မှု၏ adrenaline လောကတွင်မည်သည့်မျက်လုံးမှိတ်။ ဖြစ်ပျက်နိုင်သည်။
Forex day အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အလွန်အမြတ်အစွန်းကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အစပြုသူများ၊ အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာစီစဉ်ထားသောမဟာဗျူဟာနှင့်အပြည့်အဝမပြင်ဆင်ထားသူများအတွက်ခက်ခဲနိုင်သည်။
ဒီတော့နေ့ကုန်သွယ်မှုဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ ကြိုးစားရှာဖွေကြပါစို့
Forex တွင် Demo Account ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ကုန်သွယ် Forex အသစ်ဒါဆိုမင်းခေါင်းထဲမှာပေါ်လာမယ့်သိသာထင်ရှားတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲ Forex သရုပ်ပြအကောင့်, နှင့်သင်ကဘယ်လိုကုန်သွယ်နိုင်သလဲ
ဤလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းများကိုဖြေ ဆို၍ သင့်၏အကောင့်ဖြင့်ဘာကြောင့် စတင်၍ စတင်ရောင်းချသင့်သည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသပါမည်။
စတော့အိတ်ထရေးဒင်း vs. Forex
ယနေ့ခေတ်ကုန်သည်များသည် FAANG (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ အက်ပဲလ်၊ အမေဇုံ၊ Netflix နှင့်ဂူဂဲလ်) စတော့များထံမှကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာကိရိယာများတိုးများလာနေပြီးလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည့် Forex ၏ကမ္ဘာအထိရှိသည်။
ကုန်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံး Forex Pairs